अमेरिकी सांसद बर्नी स्यान्डर्स कसरी बने भाइरल ? नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भन्‍यो - तपाईं उहाँलाई कहाँ भेट्न चाहनुहुन्छ ?
१० माघ २०७७, शनिबार १५:१९
वाशिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएकाहरु कोही फर्मल कालो कोटमा सजिएका थिए भने कोही डिजाइनर ड्रेसमा थिए । तर, समारोहमा उपस्थित सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स भने अहिले भाइरल भइरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिका डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार जो बाइडेनका प्रतिस्पर्धी रहेका बर्नीको तस्बिर भाइरल भइरहेको छ । उनी भाइरल हुनुको मुख्य कारण उनले लगाएको सहज आउटफिट रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
शपथ ग्रहण समारोहमा बर्नी आफ्नो फेमस विन्टर ज्याकेट र मिटन (पञ्‍जा) लगाएर उपस्थित भएका थिए । उनी आफ्नो कुर्सीमा निकै कस्सिएर बसेका थिए । उनको बसाईंले केहीले ‘क्युट-सिटिङ’ भनेका छन् भने केहीले ‘फनी’ भनेका छन् । यस विषयमा जब लेट नाइट शो विथ सेथ मेयर्समा सेन्डर्सलाई पुछिएको प्रश्‍नमा उनले सिधा जवाफ दिए, “म त्यहाँ बसेर केवल जाडोबाट जोगिन चाहन्थे । के हुँदैछ भन्‍ने कुरामा ध्यान दिने प्रयास गरिरहेको थिए ।”
उनले आफ्नो विषयमा बनेका मिम्सहरु देखेको पनि बताएका छन् । उनले आफ्ना लागि मिटन विशेष रहेको बताएका छन् । ती मिटनहरु भर्मेन्टको एक विद्यालयका शिक्षले जेन इलिसले बुनेका थिए । स्यान्डर्सले भने, “विशेष किन छन् भने यि मिटनहरु इसेक्समा रहेकी एक महिलाले बनाएकी थिइन् । उनी एक विद्यालयकी शिक्षिका हुन् र निकै राम्रो मान्छे हुन् ।”
मिटनका विषयमा आएका प्रतिक्रियाहरुबारे आफू निकै खुसी भएको बर्नीले बताएका छन् । बर्नी भाइरल भएपछि उक्त मिटनहरुको मागसमेत बढेको छ ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने बर्नीको हनुमानढोका गद्दी बैठकअघि बर्नीको तस्बिर राख्दै पोस्ट गरेको छ । दूतावासले लेखेको छ, “अमेरिकी सांसद स्यान्डर्स अहिले विश्‍वभर छाइरहेका छन् । सांस्कृतिक संरक्षण परियोजनासहित संसारभर छाइरहेका छन् । तपाईं उहाँलाई कहाँ भेट्न चाहनुहुन्छ ?”
Senator Sanders is making his way around the world these days, including visiting Embassy supported cultural preservation projects! Hello Senator! 🙏
Where would you like to see him visit? 🤗 #berniesMittens
Hanuman Dhoka Gaddi Baithak image courtesy: @GaryWornell pic.twitter.com/ymgHCJRBoX
— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) January 23, 2021